Tronsmart waxay soo bandhigtay dalabyo gaar ah Noofambar 11 iyo 12 iyada oo ilaa 70% | Warka Gadget
Tronsmart waxay soo bandhigtay dalabyo gaar ah Noofembar 11 iyo 12 iyada oo leh ilaa 70%
Tronsmart, oo ah shirkad ku takhasustay maqalka oo si isa soo taraysa u soo galaysa suuq wanaagsan sida dhawaaqa wirelesska oo leh dhammaan noocyada beddelka ah. Waxaan dhawaan falanqeynay qaar ka mid ah alaabadooda ugu xiisaha badan waxaanan ku tusinnay si aad fikrad uga hesho tayada iyo shaqeyntooda.
Tronsmart waxay ku dhawaaqday laba maalmood oo heshiisyo waaweyn ah Noofambar 11 iyo 12 halkaas oo aad ka iibsan karto qalabkooda ugu fiican oo leh qiimo dhimis ilaa boqolkiiba konton ah. Nala baro waxa ay yihiin dalabyadan xiisaha leh, ha moogaan, oo ka faa'iidayso qiimo dhimista ka dhici doonta AliExpress.
Hadaad rabto inaad aragto dhammaan wax soo saarka Tronsmart, waxaad ku heli kartaa xayeysiisyada xaddidan adoo samaynaya halkan guji.
Tusaale ahaan, sameecadaha Tronsmart Onyx Prime kuwaas oo leh dhawaaq qeexitaan sare leh oo ay ugu mahadcelinayaan processor-ka Qualcomm QCC3040 iyo codec-ka aptX ee loo marayo Bluetooth 5.2 waayo-aragnimo dhawaaq tayo sare leh oo leh in ka badan afartan saacadood oo madax-bannaani (oo ay ku jiraan kharashyada lagu sameeyay kiiska): Taleefannada gacanta ee leh qiimaha caadiga ah ee 107,20 euro waxay ku kici doonaan kaliya 53,50 euro AliExpress inta lagu guda jiro Tronsmart super deals, taas oo macnaheedu yahay qiimo dhimis ka badan 50%. Waad iibsan kartaa hadda halkan ka.
Inta badan dalabyada waxay diiradda saari doonaan taleefoonnada gacanta ee Noofambar 11, marka aan arki doonno bilawga Apollo Air, aaladaha leh joojinta dhawaaqa firfircoon ee isku-dhafka ah ee ilaa 35 dB wadar ahaan oo leh kala duwanaansho soo noqnoqda. Waxay leeyihiin cVc 8.0 baabi'in firfircoon taas oo kuu ogolaanaysa inaad diirada saarto tayada muusiga iyada oo aan carqaladayn dibadeed sidaas darteed soo saari doonta go'doon dhamaystiran. Tani waxay si gaar ah xiiso u leedahay baaskiil-wadeyaasha iyo orodyahannada maadaama ay samayn doonaan jidadkooda iyaga oo xoogga saaraya waxa ay aadka u xiiseeyaan, jimicsiga. Xaaladdan oo kale, Apollo Air oo ka socota Tronsmart oo qiimaheedu dhan yahay 70 euro, wuxuu ku kici doonaa 37,81 euro oo keliya., qiimo dhimis dhab ah oo ku dhow 60 boqolkiiba oo laga yaabo inaadan rabin inaad seegto oo aad ka faa'iidaysan karto halkan riix.
Dhanka kale, moodeelka Onyx Ace, oo ah taleefoon- dhegaha-gaaban oo loogu talagalay kuwa aan la qabsan moodooyinka gudaha-maqalka, ayaa sidoo kale ku bixinaya qiimo dhimis xiiso leh kuwan Tronsmart Super Deals ee AliExpress, iyagoo helaya taleefoonnada dhegaha-dhegaha oo leh nidaam darawal afar-makrafoon ah. tayo sare leh iyo dabcan processor-ka Qualcomm si uu u bixiyo tayada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah xagga codka.
Kuwani dabcan waxay leeyihiin qiimo dhimis weyn 57%, waxay ku kacaysaa kaliya 24,70 euro qiimahan xayeysiinta ee AliExpress. Waxaad heli kartaa dalabka riix halkan. Dhab ahaantii qiimaha jaban ee qaar ka mid ah taleefoonnada gacanta ee Wireless-ka ee runta ah oo ay adag tahay in la helo iyada oo la tixgelinayo dammaanadda tayada leh ee Tronsmart ay bixiso.
Laakiin wax kastaa ma noqon doonaan taleefoonnada dhegaha la gashado, waxaa sidoo kale jira dalool loogu talagalay kuwa ku hadla, laga bilaabo mid ka mid ah moodooyinka ugu yaabka badan, Mega Pro, Qalab leh saddex nooc oo isle'eg oo kala duwan iyada oo loo marayo hal badhan. Waxay u ogolaataa in la isku xidho nidaamkeeda isku xirka horumarsan waxaanan leenahay ilaa 120W oo awood leh oo awood u leh inaan bixino dhawaaq 3D ah oo la taaban karo. Xaaladdan oo kale waxaan ku raaxeysaneynaa qiimo dhimis 30% ah, marka waxay joogi doontaa kaliya 81,04 euro, fursad aad u wanaagsan oo aad awooddo halkan ka faa'iidayso.
Soo jeedinta ugu dambeysa ee maaha sababtaas midda ugu xiisaha yar waa sameecadaha Faafin 1, kaas oo leh laba darawal iyo hiitarka dadban si uu u bixiyo waxqabad wanaagsan iyada oo loo marayo nidaamkeeda stereo ee 15W ee awoodda guud iyada oo loo marayo nidaamka DSP ee patented, kaas oo naga dhigaya inaan helno sinnaan wanaagsan iyo codad kala duwan si aan u bixinno khibradda ugu wanaagsan ee codka xitaa meelo waaweyn, Sidaa darteed, iyada oo ay ku mahadsan tahay awooddeeda iska caabinta, waxay noqon lahayd wehel safar oo wanaagsan dhammaan dhinacyadayada, Hadda oo leh 35% dhimis waxay ku joogi doontaa oo keliya 23,58 euro helitaanka boggan bixinta.
Si fiican uga faa'iidayso Tronsmart's Super Deals on AliExpress hana lumin fursadda aad ku heli karto alaabta codka ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tronsmart waxay soo bandhigtay dalabyo gaar ah Noofembar 11 iyo 12 iyada oo leh ilaa 70%
Amazon Fire TV Stick Max, oo hadda leh WiFi 6 iyo HDR